Yekupedzisira shanduro dzeWOSOS 6.2, tvOS 13.4 yakaburitswa | Ndinobva mac
Yekupedzisira shanduro dzeWOSOS 6.2, tvOS 13.4 yakaburitswa
Zvinotaridza kuti zvinyorwa zvitsva zvakaunzwa kuIOS uye iPadOS sezvakaitika pazviitiko zvakapfuura, asi macOS, watchOS uye tvOS zvakare zvine zvinyorwa zvavo zvitsva mune idzi shanduro dzekupedzisira dzakaburitswa neApple maawa mashoma apfuura. Mune ino kesi, iyo watchOS 6.2 vhezheni inowedzera rutsigiro rwe-mukati-app kutenga kwemaapplication kuwedzera mukumisikidza iyo Kushanda kweECG pane inoenderana Apple Watch muChile, Turkey neNew Zealand.
Shanduro dzese dzinowedzera nhau kunyangwe chiri chokwadi kuti chikamu chakanakisa chakatorwa panguva ino neIPOSOS uye iyo iOS vhezheni yeiyo iPhone. Chero zvazvingaitika, zvakakosha kuti uvandudze ese maApple zvishandiso izvo zvatiinazvo kumba nekukurumidza sezvazvinogona, kubvira iyo HomePod inoshanda sisitimu akagamuchira zvakare kugadzirisa.
Inowanikwa macOS Catalina 10.15.4 ine inonakidza nhau
Nhau dzeshanduro idzi dzeWOSOS neTVOS hadzingotariswe chete pakuvandudza kugadzikana uye kugadzirisa mukuchengetedza system, kunyangwe chiri chokwadi kuti vanowedzerwawo sezvazviri mushanduro nyowani dzinouya kwatiri. Iyo kutenga kwese between applications ndechimwe chinhu chatinacho zvakare sechinhu chitsva mushanduro idzi nyowani saka mukufunga tichaona mamwe maapplication aripo kunyanya muacOS app chitoro, pese panogadzirwa nevagadziri, hongu.
Covid-19 haimise michina yeApple, kunyangwe chiri chokwadi kuti iri kudzora zvishoma sarudzo idzo makambani ese anofanirwa kuratidza nhau dzadzo kupasi, kubvisa zviitiko zvakakosha seGoogle I / O, E3 kana kutoshandura chiitiko chakakura seWWDC mune chiitiko chepamhepo. Ndinovimba zvinhu zvese zvinoenda zvirinani asi parizvino zvinoita sekunge zvakaoma kuona padyo kupera kwedambudziko rakakonzerwa nedenda iri. Ushingi hwakawanda nesimba!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Yekupedzisira shanduro dzeWOSOS 6.2, tvOS 13.4 yakaburitswa
1978 Apple logo inyoresa kukisheni